I-bio ngokukhawulezayo ye-comedian kunye nentetho yokubonisa umkhosi uSheryl Underwood
Mhlawumbi owaziwa kakhulu ngendima yakhe njengeCatfish Rita ngo-2005 "UChwepheshe loBumnandi," uSheryl Underwood uqobo ngokwakhe uchazwa ngokuthi "ukuqhubela phambili ngokwesondo, oyika uThixo, oyiRepublican omnyama." Ubomi obonakala bubukeka buyiyona nto imbono yabathengi be "The Talk" bekhangela xa u-Underwood ejoyina umboniso weentetho ngexesha le-2011-2012.
Underwood wazalelwa ngo-Oktobha 28, 1963, e-Little Rock, kwiTyeya., Kwaye ubambe i-degree-bachelor degree ukusuka kwiYunivesithi yase-Illinois e-Chicago.
Ukusuka apho, u-Underwood waya kwiYunivesithi yeRhulumente waseYunivesithi yaseYunivesithi, i-Ill., Apho ifumene idigri yakhe yenkosi kwi-media management and communication mass.
Emva kwekholejini, u-Underwood wajoyina ama-Armed Forces ase-US. I-Post-service, u-Underwood uyaqhubeka negalelo kumajoni akhe kunye nabasetyhini kunye nabasetyhini ngokunikela ngexesha lakhe njengonwabisa. Ngo-2007, u-Underwood waya eKamp Arifjan, e- Kuwait , ukutyelela kunye nokukhuthaza abantu. Wayeyingxenye yomboniso obizwa ngeSgt. I-Maj. Ye-Army's Hope kunye neNkululeko yezoKhenketho, eyaziwa ngabaculi, abadumileyo kunye neendwendwe zomculo.
Ungumalungu osekuhlaleni we-Zeta Phi Beta, uhlanga lwamazwe ngamazwe nolwaseMelika olusungulwe ngowe-1920 kwiYunivesithi yaseCoward eWashington, DC Underwood wajoyina ngo-1990. U-Underwood waqala ukukhonza njengomongameli wesicatshulwa se-Omicron Rho Zeta kwaye wachazwa ngokuba nguSihlalo kaZwelonke weMalungu e-Honorary, kwaye kamva njengeSihlalo soLawulo lweSizwe soLawulo.
U-Underwood naye ilungu leBhunga leSizwe laBafazi beNigro kunye ne- NAACP kwaye wasungula uMbutho wamaKomidi waseAfrika-waseMerika.
Esoloko ekwazi ukwenza abahlobo kunye nosapho bahleka, u-Underwood wathatha iitalente zakhe ekupheleni kwee-1980. Apho wafumanisa ukuba angenza abanye bahlekise, naye.
Le talente yaqatshelwa xa i-Underwood ibizwa ngokuba yi-Miller Lite Comedy Search yokuqala yokugqibela yowesifazane ngo-1989. Emva kweminyaka embalwa, i-Underwood yayiza kuphumelela kwi-BET "I-Comedy View 's Funniest Female Comedy View ". Kwakhona wabamba umboniso weekomidi / udidi lwexesha.
Ukuphumelela kwe-Underwood - kwakunye nokuziphatha kwakhe okukhawuleza kunye nobungqina obunomdla-wabamba ingqalelo kwinethiwekhi ye-BET. Bawuthatha i-Underwood kwisimo sakhe ukuze avelise kwaye abambelele "uHolla," umboniso weentetho kwi-vein kaBill Maher "I-Political Incorrect". Umboniso wagijima ixesha elikhawulezileyo ngo-2002. Nangona umboniso wawudlulileyo, wawubonisa ukuba u-Underwood uyakwazi ukulawula isiteji aze enze abantu bahlekise. Mna
Kwakhona wamenza ukuba afune ukubona-mkhulu kwisikrini esikhulu. U-Underwood wavavanya i-chops yakhe yokwenza kwiifilimu ezimbini ezaziwayo, "Ndiyifumene" kunye ne "Beauty Shop" kunye noKumkanikazi uLatifah , ukukhwabanisa kwe-"Barber Shop".
Ukususela ekuphenduleni kwakhe "Holla," u-Underwood ubonise umdla ekugcineni umsebenzi wakhe ubophelele ukuthetha ithelevishini kunye nomsakazo. Ukuphakama kwakhe ekuhlanganyeleni "iNtetho" yayisondele ngokukhawuleza.
U-Underwood waqala ngo-2010 njengomntu onomdla kwi-"Show Joy Tomorrow Morning Show". Oku kwakhokelela ekugqibeleni kwiSteve Harvey "I-Steve Harvey Morning Show" eqhubekayo namhlanje (igalelo kanye ngeveki kule nkqubo).
Impumelelo apho yavumela i-Underwood ukuba ibambe umboniso wayo we-rediyo, "uSheryl Underwood kunye neNkampani," kwiXM yeThala leRadio yexesha elide. Emva kokususwa kwaloo mbonakaliso, u-Underwood wathuthela kwi-Sirius Satellite Radio, apho ehlala ephethe inkqubo yakhe, "I-Sheryl Underwood Show," kumjelo weJamie Foxx, i-Foxxhole.
Kodwa ngexesha lokuwa kwe-20ll, u-Underwood wamkela oko kunokubonisa ukuba yenye yeendima zakhe zokubonisa inselele. Emva kwe-CBS "I-Talk's" yonyaka wokuqala ngo-2010-2011, lo mboniso ukhethe ukungavuseleli izivumelwano zokubambisana noLeah Remini noHolly Peete Robinson. Ukuhamba kukaRinini kwabangele ukukhupha phakathi kwabalandeli bezwi, ngokukodwa ukucinga ukuba akukho mikhosi emitsha ekhethiweyo kwaye isigqibo sifikile emva nje kweentsuku ngaphambi kokuqala kwexesha lesibini.
U-Underwood wayengumbambiswano omtsha wokuqala wokujoyina umboniso kwaye wamkelwa ngabalandeli.
Ulahlekelwa ngumyeni wakhe ukuzibulala emva kweminyaka emithathu emva komtshato
Ngaba kuqwalaselwa ngabaninzi ukuba babe ngabanye abahlaziyileyo behlabathi abahlaziyileyo
Ungayifumana njani iiTikiti kwi-'Late Show Late Show kunye noJames Corden '
Iincwadi Ezikhuthazayo ZeeTitshala
Unokucinga ukuba uTata Longlegs Ungumgqwenkwezi
I-Taurus neLibra: Uthando lwabo luhambelana